တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ မှစ. သံမဏိကြိတ်စက် Shutter တံခါး, Remote Control ကိုကြိတ်စက် Shutter တံခါး, သံမဏိကင်ကြိတ်စက် Shutter တံခါးကမ်းလှမ်းရန်
ဖေါ်ပြချက်:သံမဏိကြိတ်စက် Shutter တံခါး,ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ရေးကြိတ်စက် Shutter တံခါး,သံမဏိကင်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး,လျှပ်စစ်သံမဏိကြိတ်စက် Shutter တံခါး,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > roller Shutter တံခါး > သံမဏိကြိတ်စက် Shutter တံခါး
သံမဏိကြိတ်စက် Shutter တံခါး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, သံမဏိကြိတ်စက် Shutter တံခါး, ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ရေးကြိတ်စက် Shutter တံခါး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, သံမဏိကင်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တံခါးကိုတက်လှိမ့်စက်မှုလုပ်ငန်းမြန်နှုန်းမြင့်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အစာရှောင်ခြင်းမြန်နှုန်း roller ရှပ်တာအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်သံမဏိမြန်နှုန်းမြင့် roller ရှပ်တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအမြန်လုပ်ဆောင်ချက်မြန်နှုန်း roller ရှပ်တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်မှုလုပ်ငန်းမြန်မြန် Roler ရှပ်တာဂိတ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိအစာရှောင်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက် roller ရှပ်တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ချက်လူမီနီယံအလွိုင်း roller ရှပ်တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြန်နှုန်းမြင့်အက်ရှင် roller ရှပ်တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ချက်မြန်နှုန်းမြင့် roller ရှပ်တာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တပတ်ရစ်ကြိတ်စက် Shutter ဂိုဒေါင်တံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လက်ကားဒေါင်လိုက်ကြိတ်စက် Shutter ဂိုဒေါင်တံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိကုလားကာကြိတ်စက် Shutter တံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိ fireproof ရှပ်တာဘိုင်လျင်မြန်စွာတံခါးကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြန်နှုန်းမြင့် Roller Shutter Door Overview အလူမီနီယမ်မာကျောသောမြန်နှုန်းမြင့်သောတံခါး (Industry roller shutter) သည်ယနေ့ခေတ်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုသင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။...
မြန်နှုန်းမြင့် Roller Shutter Door Overview ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္headအပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသောတံခါး - လူမီနီယံမာကျောသောမြန်နှုန်းမြင့်တံခါး (စက်မှုလုပ်ငန်း roller shutter)...
မြန်နှုန်းမြင့် Roller Shutter Door Overview လူမီနီယမ်မာကျောသောမြန်နှုန်းမြင့်သောတံခါး (စက်မှုလုပ်ငန်း roller shutter) သည်သင်၏လုပ်ငန်းအတွက်လုံးဝအထောက်အကူဖြစ်သည်။ သင်၏ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူခြင်း၊...
မြန်နှုန်းမြင့် Roller Shutter Door Overview အလူမီနီယမ်မာကျောသောမြန်နှုန်းမြင့်သောတံခါး (စက်မှုလုပ်ငန်း roller shutter) သည်ဆယ်စုနှစ်များစွာစက်မှုလုပ်ငန်း၊...
မြန်နှုန်းမြင့် Roller Shutter Door Overview သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဘယ်ကြောင့်သင် Aluminum Hard Fast တံခါး (စက်မှုလုပ်ငန်း roller shutter) လိုအပ်သည်။ အလူမီနီယမ်မာကြောမြန်သောတံခါး (စက်မှုလုပ်ငန်း roller shutter) သည် ၁ မီလီမီတာထက်ပိုသောတံခါးဖွင့်...
မြန်နှုန်းမြင့် Roller Shutter Door Overview အလူမီနီယမ်မာကျောသောမြန်ဆန်သောတံခါး (စက်မှုလုပ်ငန်း roller shutter) သည်သင်၏အလုပ်တွင်အရေးပါသောအရာအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ အဖွင့် / ပိတ်မြန်နှုန်းသည် ၀.၆ ~ ၁.၅ မီတာ / s အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ။...
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တပတ်ရစ်ကြိတ်စက် Shutter ဂိုဒေါင်တံခါး main features တွေ: Hongfa အလိုအလျောက်တံခါးကိုကုမ္ပဏီတံခါးများအမျိုးမျိုးပေး။ အဆိုပါလူမီနီယမ်လုံခြုံရေး roller ရှပ်တာတံခါးများကိုအကောင်းဆုံးရောင်းကြင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာမသာသည်ခိုးမှု,...
အလိုအလျောက်သံမဏိကုလားကာကြိတ်စက် Shutter တံခါး main features တွေ: Hongfa အလိုအလျောက်တံခါးကိုကုမ္ပဏီတံခါးများအမျိုးမျိုးပေး။ အဆိုပါလူမီနီယမ်လုံခြုံရေး roller ရှပ်တာတံခါးများကိုအကောင်းဆုံးရောင်းကြင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာမသာသည်ခိုးမှု,...
သံမဏိကုလားကာကြိတ်စက် Shutter တံခါး သံမဏိ roller ရှပ်တာတံခါးကို၏အဓိက features တွေကဘာလဲ? Hongfa အလိုအလျောက်တံခါးကိုကုမ္ပဏီတံခါးများအမျိုးမျိုးပေး။ အဆိုပါလူမီနီယမ်လုံခြုံရေး roller ရှပ်တာတံခါးများကိုအကောင်းဆုံးရောင်းကြင်နာတစ်ခုဖြစ်သည်။...
သံမဏိ fireproof ရှပ်တာဘိုင်လျင်မြန်စွာတံခါးကို
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1000 - 1800 / Set/Sets
သံမဏိ fireproof ရှပ်တာတံခါးကို သံမဏိမီးရှပ်တာတံခါးများလူနေအိမ်အဆောက်အဦးများ, အများပြည်သူအဆောက်အဦးများနှင့်စက်မှုအဆောက်အဦများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်မြေအောက်ကားဂိုဒေါင်မီးခွဲခြာ, မီးအခန်းနှင့် firewalls...
တရုတ်နိုင်ငံ သံမဏိကြိတ်စက် Shutter တံခါး ပေးသွင်း
အဆင့်မြင့် 201 သံမဏိစာရွက်, ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုဖွဲ့စည်းတိကျစွာလိပ်အသုံးပြုခြင်း။
user-ဖော်ရွေဒီဇိုင်းစတိုင်, အကြမ်းခံ, လုံခြုံ Anti-ခိုးမှု, အလင်းရောင်, လေဝင်လေထွက်, ဗေဒ, လက်တွေ့ကျသော, အပူလျှပ်ကာနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ချိန်ညှိ, Anti-ပြူ။
အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှု, Modes သာမောင်းနှင်များပြား။
အသုံးပြုသူများသည်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုအဖြစ်ပြည့်စုံ, အထူးပြု system ကိုဖြေရှင်းချက်ပေး။
ဘက်ပေါင်းစုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အလှဆင် features တွေအတူတကွရိုးရာခိုးယူကွန်ယက်ကိုလုံခြုံရေးအစားထိုးရဲ့အကောင်းဆုံးအစားထိုး; လက်ထိန်းချုပ်မှု, အုပ်စုတစုကိုထိန်းချုပ်ထောက်ပံ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လမ်းပွင့်လင်းနည်းလမ်းများ။ သည့်အခါအရေးပေါ်အတွက်တံခါးကိုသင့်ရဲ့အန္တရာယ်ကင်းကယ်ဆယ်ရေးရုပ်သံလိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သံမဏိကြိတ်စက် Shutter တံခါး ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ရေးကြိတ်စက် Shutter တံခါး သံမဏိကင်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး လျှပ်စစ်သံမဏိကြိတ်စက် Shutter တံခါး သံမဏိကြိတ်စက် Shutter ကင်တံခါး